Kuunza mota kubva kuCanada kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kuunza mota yako yekuCanada kuUnited Kingdom?
Isu tiri nyanzvi dzeindasitiri patinounza mota kuUK, saka pane kuyedza iyi yega, tinokurudzira zvikuru kushandisa masevhisi edu kuita kuti hupenyu huve nyore kwazvo kwauri.
Kutakura mota yako kubva kuCanada kuenda kuUnited Kingdom
Kutakura kubva kuCanada kunoitika kubva kuVancouver kana kuToronto, uye isu tinoronga maitiro ese kubva kuunganidzwa, mukati megungwa marori, kutumira, tsika, kuyedza uye kunyoresa. Tora Quote kubva kwatiri kune yakatemerwa uye inosanganisa quote yekupinza mota yako kubva kuCanada kuenda kuUK.
Inland Trucking YeMotokari
Tine vamiririri vakuru muCanada vanobatsira nekutengesa uye kutumira mota yako kuUK, vacharonga kuunganidzwa kwemotokari yako kubva kukero yako kana kero yemunhu wawakatenga kubva pazvinenge zvichidikanwa.
Isu tinopa akavharirwa kana akavhurika ekufambisa masevhisi kuzadzisa zvese zvinodiwa uye mabhajeti. Tichazoita kuti mota iendeswe kuchiteshi chiri padyo.
Mushure mekusvika kwemotokari yako kudepoti yedu, isu tinozozoisa mumudziyo wayo wekutakura nehanya zvakanyanya uye nekutarisisa. Vamiriri vedu vari pasi muCanada vakasarudzwa nekuda kweruzivo rwavo uye kutarisisa kune zvakadzama pavanotaura nemotokari. Vachave nechokwadi chekuti mota yako yakasungwa mumudziyo wagadzirira kutakura kuenda kuUK.
Isu tinopa inishuwarenzi yemumvura inovhara mota yako kusvika kune yakazara yakazara kukosha panguva yekufamba.
Paunenge uchipinza mota kubva kuCanada kuenda kuUK, unogona kuzviita zvachose mutero usingabhadharwi kana iwe ukave uine mota kweinenge mwedzi mitanhatu uye wakagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemiviri.
Kugadziriswa kunonyanya kusanganisira kugadziridzwa kune mwenje yemasaini pamotokari. US neCanada mota dzakagadzirwa dzinowanzo kuve nezviratidzo zvakasiyana zvemavara, izvo zvinowanzobatanidzwa mumabhureki emagetsi mabhureki. Iwo zvakare ane akasiyana mavara emarambi emagetsi uye anogara asina maside zviratidzo kana mwenje yemwenje.
Isu tinoshandura mota yako kuUK zviyero tichishandisa yazvino-mumba LED mwenje tekinoroji, zvichitibvumidza kupedzisa shanduko dzese dzinodiwa uye chengetedza mota yako dhizaini.
Mota dzinounzwa kubva kuCanada idzo dziri pasi pemakore gumi dzichazoda kuita bvunzo yeIVA iyo DVLA isati yabvumidza kunyoreswa. Sezvo iri yega kambani muUK ine nzira yakavandudzwa yeIVA yekuyedza nzira yemotokari dzevatakurwi, iyo inogamuchirwa neDVSA uye ISO yakasimbiswa, iyo nguva yainotora kupedzisa ichi chinhu chekupinza chiri kukurumidza zvakanyanya pane kushandisa vamwe vanopinza mota seyako mota. haimbofanirwe kusiya yedu saiti uye isu tinodzora yekuyedza chirongwa.
Chiyedzo cheIVA hachidiwe pamotokari dzinopfuura makore gumi, zvisinei hazvo chinofanirwa kupasa MOT saka chinofanirwa kunge chakakodzera mumigwagwa maererano nemarambi emasaini, kupfeka matai, kumisa uye mabhureki, atinozotarisa, kuti yakakodzera kuendeswa mumigwagwa yeUK.
Kana mota yapfuura makore makumi mana ekuberekwa iri MOT inoregererwa uye inogona kuunzwa yakananga kukero yako kuUK uye kunyoreswa kure.
Chero mibvunzo yaungave unayo nezvekunze mota yako kubva kuCanada kuenda kuUnited Kingdom
Tinogona kubatsira neicho chiitiko chekuburitsa mota yako kubva kuCanada?
Vatengesi vedu vanokuraira zvaunofanira kuita kana iwe uchienda kumberi nekotesheni yako. Maitiro ekutengesa kunze anosiyana nyika nenyika asi mhinduro pfupi ndeyekuti hongu, tinogona kubatsira.
Maitiro ekutengesa kunze ari nyore munyika zhinji asi zvinogona kutaridza kuvhiringidza pakutanga kuona.
Unogona kutora mota yangu here?
Tichaunganidza mota yako kubva chero kupi muCanada uye wozoiendesa kuchiteshi chako. Ichave inishuwarenzi panguva yekuita uye kamwe pane mudziyo, yakavharwa neinishuwarenzi yegungwa.
MuUnited Kingdom, isu tinokwanisawo kufambisa mota ichitenderedza kuburikidza ne network yevanotendeka vanotakura mota.
Yakawanda sei kutumira mota kubva kuCanada?
Izvi zvinoenderana nenguva yegore, uye mamiriro azvino emusika. Tichagara tichiedza kukupai yakanakisa mutengo wekutumira mota yako kuUnited Kingdom.
Kazhinji kutaura, zvinopfuura kutumira kubva kunoti, iyo East Coast nekuda kwedaro rekure.
Zvinotora nguva yakareba sei kutumira kubva kuCanada?
Zvinoenderana nekuti mota iripi. Kutumira kubva kuCanada kubva kumadokero kwemahombekombe kunotora nguva yakati rebei nekuda kwekutenderera kwedzimotokari. Inoita rwendo kuburikidza nepanama canal kazhinji zvinoreva kuti inofanirwa kudzika pasi kumadokero kwegungwa reAmerica.
Kana mota iri padyo kuti iti, New York, inogona kunge isingasviki vhiki mbiri. Chiteshi icho chakatumirwa kubva chinosarudza urefu hwenguva iyo ngarava ichave iri mugungwa.